Vahaolana automatique hampiharana adhesives
by Delta Engineering / Zoma 27 febroary 2015 / Published in Vahaolana mahazatra
Vahaolana mandeha ho azy ho an'ny fampiharana ny adhesives namboarina mba hiantohana ny doka marina sy marina amin'ny vokatra. Izany dia mandray anjara amin'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fizotran'ny famokarana tsy tapaka sy voafehy.
Alohan'ny fitsaboana sy fatra
Alohan'ny fitsaboana sy ny fatram-pandrefesana lakaà MMA misy singa amin'ny singa mifangaro
Voasoratra ho ara-dalàna ny ampahany 2 ary apetrany amin'ny conveyor. Rehefa avy nanosika ny "fanombohana" dia samy miditra amin'ny fametrahana ireo roa tonta, izay itondrana ranon-dra (Tigres) daholo. Ny lakaoly dia ampiharina amin'ny ampahany ambany. Samy miala ivelan'ny fametrahana ny roa tonta.
Fanomezana lakaoly mandeha ho azy
Ny fampiharana antsasa-kendreny avy amin'ny làlam-pandeha mihetsiketsika ho an'ny singa seramika
Ny ampahany 2 dia ampidirina amin'ny masinina amin'ny alàlan'ny mpandraharaha iray. Voalohany, teboka lakaoly no ampiharina amin'ny 1 amin'ireo faritra seramika, mba hidiran'ny mpandraharaha ary ampiana tsindrina eo an-tampon'ny teboka lakaoly. Rehefa mivoaka ny mpandraharaha dia misy ampiharo lakaoly mihatra ary mivory ny ampahany roa.